Sanadka 2020 NAB Show Abaalmarinta Sanadka | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Sanadka 2020 NAB Show Abaalmarinta Sanadka
Sanadka 2020 NAB Show Abaalmarinta Sanadka
Marka ay timaado qeybta sawirka / madadaalada, hal-abuurnimada waa cunsur muhiim u ah hal-abuurka, gaar ahaan kuwa aragti-yaha farsamada ee ka heli doona qalab badan oo xariifnimo leh. 2020 NAB Show. Abriil, 2020 NAB Show ka dhici doona Xarunta Shirka Las Vegas, halkaas oo gebi ahaanba deegaanka dabiiciga ah ee dhijitaalka ah ee shakhsiyaadka hal abuurka leh iyo khubaro farsamo oo ka kala socda asallo badan ay iskugu imaanayaan
2020 The NAB Show waa meesha ay aragti-yahanada ka socda adduunka oo idil ay u midoobaan si ay nolol ugu keenaan qaabab cusub oo xiise leh. Qayb ka mid ah xiisahaas ayaa udhaxeysa safka wax soo saarka kaas oo NAB ka dhigay khabiir marka ay timaado warbaahinta, madadaalada, iyo teknolojiyada.
Abaalmarinta sanadka ee NAB
Sannadkan, 2020 NAB Show qaban doonaa sanadlaha labaad Abaalmarinta sanadka ee NAB. Ujeedada sanadka 2020 NAB Show Abaalmarinta Sanadka Abaalmarinta ayaa ah in la aqoonsado badeecooyinka cusub ee ugu qiimaha badan uguna wanaagsan ee loo ballanqaado iyo tikniyoolajiyadda ay soo bandhigayaan dadka soo bandhigaya bandhigga.
Bandhigayaasha Wax Soo Saarka Sanadka 2020-ka NAB Show
Dhowr bandhig oo caan ah oo muujinaya alaabada ay ku taal 2020 NAB Show ku dar shirkadaha sida:
Bal ka fikir Products Inc.
Broadpeak naqshadeynta iyo soosaarida qaybaha fiidiyoo bixinta ee loogu talagalay Bixiyeyaasha Macluumaadka iyo Adeeg Bixiyaasha Adeegga Network IPTV, Cable, Satellite, OTT iyo adeegyada mobilada.
Broadpeak's faylalka tacliimeed ee xalalka iyo teknolojiyadda waxaa ka mid ah gaarsiinta:
Broadpeak's Nidaamyada iyo adeegyadu waxay oggolaadaan in la kordhiyo saamiga suuqa iyadoo sidoo kale la hagaajinayo daacadnimada macmiilka oo leh khibrad tayo sare leh. Broadpeak waxay kaloo bixisaa taageero macaamiisha adduunka oo dhan, taasoo laga bilaabo rakibaado sahlan ilaa nidaamyo gaarsiineed oo ballaaran oo gaarayo awoodo dhowr milyan oo durdurro isku mar ah.
Broadpeak ayaa lagu qaban doonaa WASHIGA SU8921.
Wixii ka badan sanadaha 25, Bal ka fikir Products Inc. waxay soosaaratay xalal qulqulka fiidiyowga hal abuurka leh ee ka caawinaya xirfadlayaasha gudaha filimada iyo warshadaha warbaahinta inay taageeraan, arkaan, wadaagaan, transcode, iyo kaydiyaan hantidooda muuqaal-dijitaalka ah. Alaabada ka socota Bal ka fikir Products Inc. waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo awood leh, la awoodi karo, oo si fudud loo isticmaali karo. Xaqiiqdii, codsiyadan qulqulka shaqooyinka gaarka ah waxay noqdeen aalado qiimo badan oo loogu talagalay idaacadaha, xarumaha dib-u-soo-saarka, iyo adeegsadayaasha ganacsigoodu ku tiirsan yahay adeegsiga fiidiyowga dhijitaalka ah.
Sanadkii la soo dhaafay, Bal qiyaas alaabooyinka Inc ' Ku ciyaaray dulucda "cusub," oo adeegsaday waxaa ka mid ahaa:
Ikhtiyaarada shatiga cusub
Ujeedada ka dambaysa Ka soo qaad Imaamyada '' mawduuc cusub 'waxay ahayd in laga caawiyo macaamiisha adduunka oo dhan. Macaamiisha ka socota Bal qiyaas Products waxay u dhexeeyaan istuudiyado waaweyn iyo shabakado telefishan ilaa dukaanno hal qof ah iyo madax-bannaani. Sanadkan 2020-ka NAB Show, Ka fikir Products Products Inc. ayaa soo bandhigi doonta xalka daruurtooda, kaas oo isku xiraya socodka shaqo ee isticmaale. Shirkadda ayaa sidoo kale soo bandhigi doonta:
ShotPut Pro (iska dejinta)
TrueCheck (isbarbar dhig & isbarbar dhig)
PreRollPost (kaydinta LTFS)
myLTO (gurmad LTFS) & ProVu (aragtida waddaniga ah)
Adeegsiga badeecada ka socota Bal ka fikir Products Inc. waxay macaamiisha qulqulka ka dhigaysaa mid wax ku ool ah wax soo saarkooda weyn iyo yarba. Bal ka fikir waxyaabaha Inc Inc. lagu qaban doono Booth SL13605. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku Bal ka fikir Products Inc. baadhid www.imagineproducts.com.
Videon Central Waxay u shaqeeyaan sidii soosaara googo '4K iyo HD nuqul. Shirkadu waxay ku takhasustay horumarinta alaabada soosaarka ee u saamaxaysa dadka aqoonta u leh iyo xirfadleyda inay u wareegaan warbaahinta meel kasta oo ay u socdaan shaashad kasta. Nidaamyada socodka Videon Central waxay awood u siinayaan si fudud, dhaqaalihiisu si toos ah ugu duubayaan fiidiyoow tayo sare leh.
Videon Central waxay soo bandhigi doontaa xalalkeedii ugu dambeeyay ee tooska ah ee labada barnaamij ee suuqyada iyo suuqyada dhacdada 2020-ka NAB Show. Waxyaabaha shirkaddu soo bandhigi doonto waxay noqon doonaan labo khad cusub oo wax soo saar cusub:
Xero xisaabiyaha geeska EdgeCaster
The VersaStreamer Waxay u wada shaqeyn karaan sida xodxodiyaha iyo xodxodashada isku mar, taas oo muhiimad ahaan ka dhigeysa isugeynta-dhibic ka soo baxda shabakadaha maxalliga ah ama dadweynaha oo aad uga sahlan. Taageerada HLS waxay sidoo kale awood u siineysaa inay ku qulqulaan laptops, aaladaha mobilada, iyo TV-yada caqliga badan ee shabakadda maxalliga ah. Qalabka nooca loo yaqaan 'Sitastreamer' wuxuu sidoo kale oggolaanayaa isku-socodka isku mar ah illaa saddex websaydh (RTMP), oo ay ka mid yihiin:
Videon Central's Xero xisaabiyaha geeska EdgeCaster waxay bixisaa daahid aad u hooseysa xitaa marka ay ku qulqulayaan iskuxiryada internet ee dadweynaha mashquulka badan. Waxa kale oo ay la shaqaysaa Aws aasaaska sida iskaashiga tikniyoolajiyada AWS ee u oggolaanaya Videon Central inay u siiso dadka isticmaala '<3 labaad CMAF socodka qulqulka'.
Videon Central lagu qaban doonaa WASHIGA SU9322. Macluumaad dheeri ah, kala soco videon-central.com/.
NAB Show Soo-saarkii Abaalmarinta Sanadlaha Abaalmarinta
Marka lagu daro dhowr shirkadood oo kale taas oo lagu soo bandhigi doono sanadka 2020 NAB Show, ka NAB Show Alaabada Sanadka Abaalmarinta yeelan doonaa guuleystayaal lagu magacaabay mid kasta oo ka mid ah qaybaha soo socda:
Barashada AI / Mashiinka
Maareynta Hantida, Automation, Meeleynta
Soosaarka Audio, Ka shaqeynta iyo Xiriirinta
Taageerada Kaameerada, Xakameynta iyo Qalabka
Xisaabinta Cloud iyo Virtualization
Farshaxanada, tifaftirka, VXF, Wareejiyeyaasha
Shabakadda IT / Kaabayaasha & Amniga
Wax soosaarka fog
The 2020 NAB Show Wax soo Saarkii Abaalmarinta Sanadka waxaa lagu dhawaaqi doonaa Abriil 21, 2020. Xafladda waxaa lagu qaban doonaa Hoteelka Westgate, Ballroom A, laga bilaabo 5:30 pm illaa 7 pm Nomineesku waa inuu joogaa si uu u guuleysto iyo khidmadaha tartanku waa $ 295 halkii soo gal / alaab. Shirkad kasta waxay magacaabi kartaa wax ka badan hal shey hal ama dhowr qaybood. Si kastaba ha noqotee, alaabo kastaa waa inay lahaataa qaab galitaan oo u gaar ah, lagamana soo celin doono khidmadaha soo-galitaanka.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan 2020 NAB Show, baadhid www.nabshow.com/.
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2020 NAB Show Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention Broadpeak NAB 2015 NAB 2016 Abaalmarinta sanadka ee NAB NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB16 nabshow Videon Central	2020-01-02
Next: Khibrad khibrad leh u-gudbinta Weeraarka